IMIZAMO YESAFA YOKUBUYISA ABALANDELI EZINKUNDLENI ZEBHOLA LIKANOBHUTSHUZWAYO – SIVUBELAINTUTHUKO
INHLANGANO eyengamele ibhola likanobhutshuzwayo eNingizimu Afrika, iSouth African Football Association (Safa), ithi kulokoza inhlansi yethemba mayelana nokubuya kwabalandeli ezinkundleni zezemidlalo kuleli. Le nhlangano ithi ikholwa ukuthi sesifikile manje isikhathi sokuthi kube khona okwenziwayo mayelana nalesi simo.
Kwisitatimende esithunyelwe yile nhlangano iveza ukuthi izokwenza konke okusemandleni ayo ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi siyabuyekezwa isinqumo esathathwa mayelana nokuhoxiswa kwabalandeli ezinkundleni zakuleli.
“Sizokwenza konke okusemandleni ethu ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi bayabuyiswa abalandeli bebhola lezinyawo ezinkundleni zaseNingizimu Afrika. Siyethemba nokuthi lokhu kuzokwenzeka futhi akukho nokukodwa okuzovimba manje,’’kusho isitatimende.
Kuzokhumbulela ukuthi sekuphele isikhathi eside kakhulu bengabonwa nangalukhasha abalandeli bebhola lezinyawo ezinkundleni zebhola laseNingizimu Afrika.
Ukunyamalala kwabo kwaba yimbangela yokuvumbuka kwokhuvethe iCovid 19 ngo-2020. Lokhu kwayithikameza kakhulu isizini kangangoba kwaze kwadingeka ukuthi ingxenye ethile yemidlalo eyabe isele iqedelwe ezinkundleni okwabe kukhala ibhungezi kuzona.
Sekungumlando manje ukuthi ngaleso sikhathi iPremier Soccer League (PSL) yayisaxhaswe ngabakwa-Absa. IMamelodi Sundowns yiyona eyagcina iba yizingqwele kuleyo sizini iphuca iChiefs iqatha emlonyeni ngomzuzu wokugcina.
Ukungabibikho kwabalandeli ezinkundleni zezemidlalo zakuleli sekube yinto esekukhulunywe kakhulu ngayo bebaningi abantu abazwakalisa ukungenami kanye nokungagculiseki kwabo mayelana nalesi simo.
USihlalo weKaizer Chiefs okuyizingqungqulu zaseGoli ezinabalandeli abagcwele iNingizimu Afrika yonke, uMnuz Kaizer “Shintsha Guluva” Moatoung ungomunye oseke waphumela obala wathi kuyabalimaza kakhulu njengeqembu ukungavunyelwa kwabalandeli kuleli.
MAGAYE CELE IMEYA yoMkhandlu waseMandeni enyakatho yeKwaZulu Natal, uKhansela Thabani Mdlalose ugqugquzela kakhulu abantu abasha bakule ndawo ukuthi bangazitheIi ngabandayo kodwa bazijwayeze ukuzibandakanya nomdlalo wekarate. UMeya walo Mkhandlu uchaze ukarate njengeminye yemidlalo emqoka kakhulu okufanele kubonakale abantu abasha beyidlala njengeminye. Abantu abasha bakule ndawo bebephume ngobuningi bezozibandakanya nalo mqhudelwano obonakale uba nesasasa elikhulu kulo mphakathi. […]
ISIBOPHEZELO SOKWENZA KAHLE KWABASUBATHI BASENINGIZIMU AFRIKA KULO NYAKA
MAGAYE CELE ISEMBHIDLANGWENI wokuthi ibuyise isithunzi seNingizimu Afrika kwezokusubatha, inhlangano eyengamele ezokugijima kuleli, i-Athletic South Africa (ASA). Lezi zindaba zidalulwe yiloyo onguMengameli we-Athletic South Africa, uMnuz James Moloi, obekade ekhuluma kabanzi ngezinhlelo abanazo ngezokusubutha ngonyaka omusha ka-2022. Ngokusho kukaMoloi kumqoka kakhulu ukuthi izwe iNingizimu Afrika libonakale libuyelwa yisithunzi kuyona yonke imiqhudelwano ezoyigijima kulo nyaka. Uthe […]
UZWANE UPHAWULA NGOKUZITSHWA KWIBAFANA BAFANA
MAGAYE CELE ISETHENJWA seMamelodi Sundowns, uThemba Zwane sesiphumele obala saphawula ngokuzitshwa kwaso ngumlolongi weqembu lesizwe, iBafana Bafana phezu kokuba lo mdlali ebonakala esefomini enhle kakhulu. UZwane oyisikhwishikhwishi seMamelodi Sundowns nosenesipiloyoni esikhulu semidlalo yeCAF Champions league uthi uyasihlonipha isinqumo sikaHugo Broos ololonga iBafana Bafana sokumziba njalo uma ememezela iqembu lesizwe laseNingizimu Afrika. Selokhu iBafana Bafana yalolongwa nguHugo […]